ကုမ္ပဏီ၏မော်ကွန်းတိုက် - စာမျက်နှာ ၂ မှ ၂ - Teles Relay
အီဂျစ် - စစ်တပ်သည်နှလုံးသားကို coronavirus - Jeune Afrique ကထိမိစေသည်
Jusque-là accusée de minimiser l’ampleur de l’épidémie, l’Égypteadû prendre des mesures plus radicales après la mort de deux généraux proches du président Sissi. ...
ကင်မရွန်းနိုင်ငံရှိဖိအားပေးမှုခံနေရသောအကျဉ်းသားများသည် coronavirus ခြိမ်းခြောက်မှုကိုရင်ဆိုင်ရသည် - Jeune Afrique
Surpopulation carcérale, promiscuité et vétusté nourrissent la peur de la contagion chez les détenus comme chez leurs proches. À l’extérieur des prisons camerounaises, des avocats réclament une «…
အာဖရိကတွင်ကူးစက်ရောဂါကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်နည်း - WHO နှင့် AU မှသိပ္ပံပညာရှင်များ၏ရောဂါလက္ခဏာ။
၂၀၂၀၊ မတ်လ ၂၅ ရက်တွင် Dakar လမ်းများရှိ corraavirus ကာကွယ်တားဆီးရေးသတင်းကိုပန်းချီရေးဆွဲသူအနုပညာရှင်တစ် ဦး မှဆွဲသည်။ © Sylvain Cherkaoui / AP / SIPA ...
[Tribune] Scheherazade အမွေဆက်ခံသူ - Jeune Afrique
Par Aïssata Lam Présidente de la Jeune Chambre de commerce de Mauritanie Des femmes manifestent à Alger, le9avril 2019. © Mosa'ab Elshamy/AP/SIPA ...
Grégoire Owona သည် Nexttel ၀ န်ထမ်းများအတွက်လစာပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်းရန်အမိန့်ပေးသည်
အသေးစိတ် Lebledparle.com, FrançoisGaël Mbala ထုတ်ဝေသည်: မတ်လ 27, 2020 …
စိတ်မသာညည်းတွားခြင်း - Manu Dibango ၏ရုပ်အလောင်းသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ Covid-19 သေဆုံးသူအားလုံးနှင့်တူသည်။
Il y’a quelques jours, tirait sa révérence le célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango, des suites d’une infection au Covid-19. Cette grande perte est survenue à un moment où le monde entier plait sous le nombre croissant…
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန့်စစ်၏နေအိမ်၌တစ် ဦး က prelate
အသေးစိတ် Lebledparle.com, Jean Mineur ONDO ထုတ်ဝေသည်။ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၀ …
Yopougon ရှိတိုက်ခိုက်မှုများ - CNIs ပေးဆပ်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခြင်း
Le centre d’enrôlement des Cartes nationales d’identité situé dans les locaux de la Mairie Technique de Yopougonaété le théâtre ce matin, d’échauffourées : en cause, des individus se réclamant d’un mouvement opposé au mode…
ဆီနီဂေါ - ဘာကီဆမ် -“ Coronavirus အကျပ်အတည်းသည်လောကနိုင်ငံများ၏ဝိရောဓိကိုဖော်ပြသည်။
စီနီဂဲလ်တွင်၊ coronavirus ကပ်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကိုတားဆီးရန်အတွက်ဝတ်ပြုရာနေရာများပိတ်ပစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများသည်ဘာသာရေးအာဏာကိုဆန့်ကျင်သောလောက၏အာဏာကိုမေးခွန်းထုတ်သည်။
မာလီနိုင်ငံတွင်ကျန်းမာရေး“ အံ့ဖွယ်အမှု” ၏အဆုံးသည်နိမ့်ကျသောဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စေသည်။
Mali သည်ပထမ ဦး ဆုံး coronavirus ကူးစက်မှု ၂ ခုကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကျွမ်းကျင်သူများကမူခြိမ်းခြောက်မှုလျော့နည်းသွားပြီးကြောက်ရွံ့နေလျှင် ...
လွန်ခဲ့သော 12345 ... 75 လာမယ့်